Dhadhan (Af Ingiriis : Taste ama gustation; Af carabi: تذوق) waa dareenka uu sheego carabku markuu shay la falgalo. Neerfaha iyo xididada Dhadhanka oo uu la socdo xubnaha urta ayaa sheega nooca dhadhanka shey. Dhadhanku wuxuu ka mid yahay shanta laxaad ee dadka iyo xayawaanku leeyihiin. Dhadhanku waa dareen uu bixiyo carabku markuu taabto walax sida cunto oo kale isla markaana maskaxda u tebiyo sida waxaldaasi tahay, taasi oo iyadna soo sheegta nooca uu yahay dhadhankiisu.
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 23 Sebteembar 2015, marka ee eheed 00:42.